Ogologo nnabata nke Mahadum Richmond na nnabata chọrọ 2021: Akụkọ Schoollọ Akwụkwọ Ugbu a
Richlọ akwụkwọ nnabata nke Richmond na nnabata chọrọ 2021
Ogologo nnabata nke Mahadum Richmond bụ otu ozi enyere maka mkpịsị aka gị ma ọ bụrụ na ịchọrọ debanye aha na mmemme ọ bụla nke Mahadum Richmond. Ya mere, jiri ihe okpukpe gụọ ihe ndị dị na peeji a iji kee onwe gị ozi zuru ezu.
Ihe I Kwesịrị Knowmara Banyere Mahadum Richmond
Mahadum nke Richmond ụmụ akwụkwọ nwere ike ịga mmiri na-acha ọcha na James River dị nso, ma ọ bụ nwee ike ịkwụsị ụfọdụ n'ime ọtụtụ ihe omume n'obodo ahụ n'afọ niile, dị ka Richmond Folk Festival na Richmond Greek Festival.
Mahadum nke Richmond bụ ụlọ ọrụ nkeonwe nke e hiwere na 1830. O nwere ngụkọta debanye aha na kọleji nke 3,161, ntọala ya bụ obodo dịpụrụ adịpụ, ogige kampị bụ acres 350. Ọ na-eji kalenda agụmakwụkwọ nke ọkara afọ agụmakwụkwọ.
O di na isi obodo Virginia nke Richmond, nke bu obodo ama-ama, juputara na ogige, omenaala, ndu-abali, na ohere maka izu ike di n’èzí. mahadum nke otu aha agaghi adi ike gwu.
E nwere ọnụ ọgụgụ dị nta nke ebe egwu egwu na-ewu ewu na ime obodo, yana ọtụtụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ, Ogwe, na klọb. Na Mahadum nke Richmond, otu ụzọ n'ụzọ atọ nke ụmụ akwụkwọ na-etinye aka na sistemụ Greek, gụnyere ihe gbasara 15 nwanne na mmekọrịta.
Ọ bụrụ na ndụ Greek abụghị ihe gị, enwere karịa klọb na ụlọ akwụkwọ ụmụ akwụkwọ ndị ọzọ 170 ka ị lelee.
Eziokwu ndị ọzọ banyere Mahadum Richmond
RCmụ nwoke RC Xtreme niile dị ezigbo mma maka ndị ọhụrụ ndị chọrọ iso ụmụ klas ha na-aga njem njem na ngwụsị izu, na ụmụ akwụkwọ ụmụ akwụkwọ nwere ike ibi ma mụta site na mmemme dị ka Ready for Moore, ụlọ obibi nke ebe obibi iji bulie ikike iduzi.
Uslọ mposi bụ nhọrọ a na-ewu ewu maka ụmụ akwụkwọ nke afọ niile, dịka ihe karịrị pasent 90 nke undergraduates họrọ ibi n’ụlọ nzukọ.
Mahadum nke Richmond bụ naanị ụlọ akwụkwọ dị na mba ahụ iji ududo dịka mascot ya pụrụ iche, ndị otu egwuregwu Spiders niile na-asọ mpi na NCAA Division I Atlantic 10 Conference, belụsọ maka bọọlụ na golf ụmụ nwanyị.
Ndị otu ahụ so n'òtù egwuregwu ịgba ọsọ nke Colonial. Fansmụ akwụkwọ na-egwu egwuregwu na Richmond Rowdies na-eme ndị egwuregwu obi ụtọ - ọkachasị asọmpi Spider basketball na otu egwuregwu bọọlụ.
Mahadum ahụ na-enye karịa 75 na-amụ ihe na mba ndị ọzọ, na ihe karịrị ọkara nke ụmụ akwụkwọ niile na-ekere òkè na ohere zuru ụwa ọnụ tupu gụsịrị akwụkwọ.
Mahadum Richmond University 2021
Richmond Mahadum ogo sitere na nyiwe ugwu. Igwe ndị a na-enweta ụlọ akwụkwọ dị ka arụmọrụ ha si gafee usoro ihe ngosipụta zuru ebe niile nke kacha mma.
E nyela Mahadum nke Richmond ọkwa ndị a;
# 22nd N'etiti mba "Best Liberal Arts kọleji" site na US News & World Report
# 25th "Uru Kachasị Mma" n'etiti ụmụ akwụkwọ kọleji na-emesapụ aka site na US News & World Report
# 26th kacha mma uru kọleji nka kọleji nka site n'aka Ego nke Onwe Kiplinger
Mahadum 1st na -emepụta ndị Ọkachamara Fulbright US kachasị - nke agbakwunyere n'etiti ụlọ akwụkwọ bachelor na 2018
# 1 "Kasị mara mma campus" na mba site The Princeton Review
Ogologo nnabata Mahadum Richmond
Mahadum nke Richmond na-enye Mbido na-enweghị njikọ, na-ejikọ Mkpebi M na M na II, yana Mkpebi Nzuzo na-ezube maka oge ọdịda maka ndị na-enyocha afọ mbụ.
Mahadum nke University nke Richmond kacha ahọrọ na nnabata nnabata nke 28% na nnabata nnabata nke 33.4%.
Agbanyeghị, ọkara ndị chọrọ itinye akwụkwọ na Mahadum Richmond nwere akara SAT n'etiti 1290 na 1460 ma ọ bụ akara ACT nke 30 na 33.
Agbanyeghị, otu ụzọ n'ụzọ anọ nke ndị nabatara nabata natara akara karịa usoro ndị a na otu ụzọ n'ụzọ anọ gbatara n'okpuru usoro ndị a. Oge njedebe ngwa ngwa bụ Jan. 1 na ngwa ngwa na Mahadum nke Richmond bụ $ 50.
Richmond 2021 chọrọ nnabata
Ndị isi na-abanye na Mahadum Richmond na-atụle a nwata akwụkwọ GPA ihe omuma ulo akwukwo di nkpa.
A na-ahụta ọkwa ọkwa nke ụlọ akwụkwọ sekọndrị dị ka onye dị mkpa na akwụkwọ ozi nke nkwenye dị mkpa maka ndị isi nnabata na Mahadum nke Richmond. Ọ kwụsịghị n’ebe ahụ. Ebe ọ bụ na a na-enye ntinye maka ọkwa dị iche iche, ihe a chọrọ nwere ike ịdị iche.
Ndi choro nnabata nke mbu
Na ntụle ọnụego nnabata Mahadum Richmond. Onye obula choro inweta ozi nke nwere ntuziaka maka uzo esi enweta ha Portal Spider akaụntụ n'ime otu izu nke itinye n'ọrụ na Richmond.
Ndị anamachọ ihe kwesiri ịbata oge niile iji nyochaa nyocha ngwa ha ma kwado izu ezu nke ngwa ha.
Applicationgwọ Ngwa bụ $ 50 USD. Nwere ike ịlele iwu ịkwụsị ụgwọ anyị Ebe a.
A nabatara ngwa Ngwa Oke or Mmekọrịta ngwa. Ihe ngwa ngwa niile na-akwado ga-adị na faịlụ site na njedebe nzere maka atụmatụ itinye aka.
Ngwa niile dị na faịlụ site na Disemba 1 (n'agbanyeghị atụmatụ ngwa) a ga-atụle maka ndị ọkà mmụta Richmond.
Atụmatụ Ngwa ngwa imecha Nzere Oge imecha Datebọchị Nkwupụta Dị Mma
Mkpebi Mbido M * November 1 November 15 December 15
Ihe mmalite November 1 December 1 January 25
Mkpebi Oge Mbụ II * January 1 January 15 February 15
Mkpebi Oge January 1 February 1 April 1
Naanị otu nzaghachi edemede ka achọrọ. Họrọ n'ime ihe ndị a:
Kedu ihe ịma aka zuru ụwa ọnụ, isiokwu ikpe ziri ezi, ma ọ bụ ikpe na-ezighị ezi agbụrụ nke ị nwere mmasị na ya? Kedu ihe ngwọta ma ọ bụ nsonaazụ ị na-atụ anya ịhụ?
Site na oge ị gụsịrị akwụkwọ na kọleji, a ga-enwe ọrụ ndị na-adịghị adị taa. Kọwaa otu n'ime ha na otu Richmond nwere ike isi kwadebe gị maka ya.
Achọrọ ka ị nọrọ n'afọ ọzọ n'afọ gara aga ma ọ bụ n'ọdịnihu. Kedu afọ ị ga-aga njem na gịnị kpatara ya?
Oke okwu: Opekempe 350. Okwu pere mpe 650.
Esi nyefee: Ederede Richmond dị na Ngwa Ngwa na Njikọ Aka ma ọ bụ nwee ike ịdenye ya na Ududo Spider gị.
Akwụkwọ Ntụziaka nke High School
A choro akwukwo ulo akwukwo ulo akwukwo nke nwere akwukwo 9-11.
Esi nyefee: Onye ọrụ ụlọ akwụkwọ ga-edozi akwụkwọ a ma ziga ya site na email, ọrụ elektrọnik nke atọ (dịka Naviance, Parchment, ma ọ bụ Scoir), ma ọ bụ ozi.
Cheta na: Ederede ụlọ akwụkwọ sekọndrị ikpeazụ maka ndebanye aha.
Ụlọ Akwụkwọ Secondary
Onye isi ulo akwukwo mejuputara akwukwo a. Ọ na-enye profaịlụ nke ụlọ akwụkwọ sekọndrị na nchịkọta nke agụmakwụkwọ na-agụ akwụkwọ na-anọchite anya klas nke gụsịrị akwụkwọ.
A na-anakwere ụdị ọkwa ụlọ akwụkwọ sekọndrị ọ bụla, gụnyere akwụkwọ anamachọihe ma ọ bụ akwụkwọ anamachọihe, ma ọ bụ ụdị nke ụlọ akwụkwọ sekọndrị nyere.
Esi nyefee: Onye ọrụ ụlọ akwụkwọ ga-ede akwụkwọ a, ma ziga ya site na email, ọrụ eletriki nke atọ (dịka Naviance, Parchment, ma ọ bụ Scoir), ma ọ bụ ozi.
Otu akwụkwọ ozi sitere n'aka onye isi ụlọ akwụkwọ chọrọ, nke kwesịrị nke onye ndụmọdụ ụlọ akwụkwọ.
A ga-enyocha ngwa a ga-atụle ihe ruru abụọ ọzọ; agbanyeghị, n’ibuli olu a na-enweta n’afọ ọ bụla, a gaghị enwe ike ịchọpụta ma ọ bụ kweta ha n’otu n’otu.
Esi nyefee: Onye ọrụ ụlọ akwụkwọ ma ọ bụ onye na-ede akwụkwọ ozi na nnọchite gị ga-etinye akwụkwọ edemede gị. Enwere ike izipu akwụkwọ ahụ site na email, ọrụ elektrọnik nke atọ (dịka Naviance, Parchment, ma ọ bụ Scoir), ma ọ bụ ozi.
Maka klaasị na-abanye na Fall 2021, Mahadum nke Richmond agaghị achọ akara SAT / ACT iji kwado ngwa gị.
Ọ bụrụ na ịchọghị ị nweta nsonaazụ ule tozuru etozu na nyocha nke ngwa gị, biko gosi ya mgbe etinyere na ngwa ahụ.
Anyị anaghị achọ ngalaba SAT Essay, ngalaba ACT Writing, ma ọ bụ SAT ule.
Richmond karịrị abụọ ACT na SAT, mana ọ gafere ule.
Mee nyocha koodu - 4410; Koodu nnwale SAT - 5569
Ikpeazụ ule ụbọchị Nnyefe BY ngwa Atumatu
Mkpebi Oge Mbụ I
Septemba ACT na Ọchịchị October SAT; enwere ike ịkọ akụkọ site na Ọchịchị Ọchịchị na October SAT na Nọvemba.
October ACT na nchịkwa SAT; ọnụ ọgụgụ sitere na nchịkwa November SAT nwere ike ịkọ akụkọ onwe onye.
Mkpebi Mkpebi II
Disemba ACT na nchịkwa SAT.
Disemba ACT na nchịkwa SAT; A na-akọ akụkọ site n'aka nchịkwa nchịkwa nke February.
Budata akwụkwọ nyocha akara gọọmentị sitere na CollegeBoard ma ọ bụ ACT, na nkwupụta onwe onye site na Spider Portal
Nye iwu ka ezigara akụkọ nchịkwa gọọmentị ozugbo na CollegeBoard ma ọ bụ ACT
Rịọ onye ndụmọdụ ka iziga mkpesa akara gọọmentị site na email ma ọ bụ ọrụ elektrọnik nke atọ (dịka Naviance, Parchment, E-Scrip, Scoir, ma ọ bụ Scribbles).
Cheta na: A ga-achọ ka ụmụ akwụkwọ niile na-edebanye aha tinye akwụkwọ akụkọ sitere n'aka ụlọ ọrụ nyocha.
Agadi Ọkwa Ndị Agadi
Ngozi Achọrọ site na Atụmatụ Ngwa
Mkpebi Oge Mbụ I - Nke mbụ nkeji iri na ise / ọnwa atọ
Omume mbido - Ngozi mbụ nke ọnwa atọ / ọnwa atọ
Mkpebi Mkpebi II - Nke mbụ ọkara afọ / ọnwa atọ / nkeji iri na ise
Mkpebi Mkpebi - Nke mbụ ọkara afọ / akara ule ndị okenye
A ga-edozi akararịrị ogogoro nke agadi mgbe ha ruru. A ga-anabata akararịrị mgbe emechara nzere ahụ, mana ọ ga-adịrịrị na faịlụ tupu emee mkpebi mbanye ma wepụta ya.
Esi nyefee: Nyochaa ma ọ bụ detuo akụkọ ọkwa ọganihu, na nkwupụta onwe onye site na Spider Portal
Were nseta ihuenyo nke ibe akara ntanetị (njide ahụ ga-agụnye aha mbụ na aha ikpeazụ gị), na nkwupụta onwe onye site na Spider Portal
Rịọ onye ndụmọdụ ka ị ziga akara ule site na email ma ọ bụ ọrụ eletriki nke atọ (dịka Naviance, Parchment, ma ọ bụ Scoir).
Akwụkwọ agbakwunyere (nhọrọ)
Akwụkwọ agbakwunyere bụ nhọrọ, ma nwee ike tinye ya na mgbakwunye na akwụkwọ anamachọihe achọrọ.
Aremụ akwụkwọ na-agba ume ịtụle otu esi ahọrọ ozi ndị ọzọ ga-enye nghọta maka agụmakwụkwọ ha, ọkachamara, na ahụmịhe nke ha.
Esi nyefee: Bulite na Portal Portal ma ọ bụ email gị [email protected]. Ọ bụrụ na ị na-eziga ihe ndị ọzọ dị ka nseta ihuenyo, biko zipụ ya dị ka mgbakwunye na email. Anyị enweghị ike ịhazi ihuenyo nke ezitere n'ime ahụ email.
Ajụjụ gbasara ọnụego nnabata Mahadum Richmond
Mahadum ahụ ọ na-agụnye nghazi mmekọahụ, njirimara nwoke na nwanyị, yana ngosi nwoke na nwanyị na amụma enweghị ịkpa oke?
Ee! Mmekorita nwoke na nwanyi, njirimara nwoke na nwanyi, na okike gosiputara na atumatu ndi University nke adighi iche.
Kedu ka m ga-esi nweta leta m?
A ga-ekenye ụmụ akwụkwọ bi na igbe akwụkwọ ozi mahadum. A na-ekenye ụmụ akwụkwọ ọhụụ maka Ọgọstụ 1 maka okwu ọdịda. Studentsmụ akwụkwọ nwere ike ịbanye na BannerWeb iji nweta adreesị nzipu ozi ha.
Postlọ ọrụ nzipu ozi dị na Heilman Center. Adighi ezipụ ozi na ime ụlọ ọ bụla.
Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ndị ọzọ, biko kpọtụrụ Ọrụ Ozi na 804-289-1890.
Ndi ẹyenọ mi nsan̄autom edieke nsan̄autom mi m movesdụhe m ordịghe ọkpọn̄ mi?
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịrịọ onye gị na ya bi, kpọtụrụ Taylor Walsh ozugbo. Enwere ohere maka ọrụ site na idencelọ Ọrụ Ndụ na Housinglọ atlọ n'oge ọ bụla.
Enwere oge, ọkachasị n'oge ezumike oge oyi, mgbe a ga-ekenye oghere dị iche iche ozugbo oghere dị n'ihi ụmụ akwụkwọ ndị echere echere maka ọrụ.
Kedu onye m ga - akpọtụrụ ma ọ bụrụ na m chọrọ ịpụ na kọleji?
email Patrick Benner. Gụnye ihe mere ịchọrọ ịhapụ ụlọ akwụkwọ.
Kedu onye m ga-akpọtụrụ gbasara ịgba ụgwọ mmebi?
email Jocelyn Hermosilla ma ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ gbasara mmebi ịgba ụgwọ.
Edere ọdịnaya dị na saịtị a na ebumnuche dị mma. Ọ bụrụ na ị nwere ọdịnaya a ma kwenye na emebi ma ọ bụ emebi iwu nwebisiinka gị, gbaa mbọ hụ na ị kpọtụrụ anyị na [[email protected]rrentschoolnews.com] ịde akwụkwọ mkpesa na omume a ga-ewere ozugbo.
AAUA Fresh Students Sandwich Registration Usoro - 2015/16
RNU Transcript na Akwụkwọ Nyocha Ngwa Ntuziaka.
Otu esi etinye akwukwo ma nweta ego mgbazinye ego nke US Bank 2021
UNSW Business School International Pathways Award 2019 na Australia
COOU (ANSU) Kalịnda Agụmakwụkwọ agụgharịrị 2019/2020 Oge Ọmụmụ
WAEC GCE rụpụtara ụbọchị 2020: Hụ mgbe a ga-ewepụta ya
IAUE Post UTME 2020/2021 ingdị Nyocha, Ikike na Oge ikpebi
Tags: Mahadum Richmond Admiissions
« Akwụkwọ edemede edemede nke ihe atụ 2021 Lee Nzọụkwụ Nzọụkwụ Nzọụkwụ
Edemede edemede Isiokwu 2021 Lee emelitere Comprehensive Ndepụta »